महिलाले भित्री बस्त्र खरिद गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनैपर्छ ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
महिलाले भित्री बस्त्र खरिद गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनैपर्छ !
बाहिरी बस्त्र खरिद गर्दा त्यसको रुपरंग, बनौट सबै कुरामा ध्यान दिन्छौं, ताकि आफुलाई सुहाउँदो होस् । तर, भित्री बस्त्र नि ?
कस्तो रंगको भित्री बस्त्र ? यो प्रश्न तपाईलाई वाहियात लाग्न सक्छ । तर, चिकित्सकहरु भन्छन् सेतो भित्रि बस्त्र लगाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । रंगबिरंगी भित्री वस्त्र आकर्षक देखिएपनि सफा एवं सेतो रंगको भित्री बस्त्र नै राम्रो हुन्छ ।
महिलाहरुले भित्रि वस्त्र धुने बेला यसलाई राम्रोसँग नियाल्नुपर्छ । यसमा सेतो टाटो देखियो भने चिन्ताको विषय हुन्दैन तर रातो टाटो देखियो भने स्त्रीरोग विशेषज्ञको परामर्श लिनु उचित हुन्छ । साथै भित्रि वस्त्र धुने डिचर्जेन्ट कुनै रंग वा वास्नारहित हुनुपर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् ।
राति सुत्दा भित्रि वस्त्र नलगाएकै राम्रो
जो महिलाहरुले सारा दिन बाँधिएको कपडामा बिताउनुपर्छ, उनीहरुले रातमा भित्रि वस्त्र नलगाउनु उचित हुन्छ । भित्रि वस्त्र नलगाइ सुन्दा महिलाहरुले छुट्टै आनन्द पाउँछन् र शरीरको त्यो भागलाई पनि राहत मिल्छ ।
भित्रि वस्त्र नलगाउँदा के हुन्छ ?
आजकाल केही महिलाहरु भित्रि वस्त्र नै नलगाई पनि हिँड्छन् । यसो गर्नु पनि उचित होइन । महिलाहरुले शरिरको माथिल्लो भागको भित्रि वस्त्र नलगाउँदा छातिको मासु झोल्लिएर शरीरको सेप बिग्रिन सक्छ ।
भित्रि बस्त्र कहिले बदल्ने ?
महिलाहरु बदलिदो फेसनअनुसार आफ्नो कपडा-जुत्ता आदि बदलिरहन्छन् । तर भित्रि खासै ध्यान दिँदैनन् । पुरानो लुगाले नै नै काम चलाउँछन् । तर धेरै पुरानो भित्रि वस्त्र लगाउँदा अनेक समस्याहरु आउन सक्छन् । त्यसैले इलास्टिक लुज हुनुभन्दा अगाडि नै भित्रि वस्त्र बदल्नु राम्रो हुन्छ ।
डाक्टरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, चैत ७ २०७७ २१:३८:४८